ဖြေရှင်းချက် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
+86 13714518751(WhatsApp ကို / Wechat)
ထိပ်တန်းတရုတ်ကဗီဒီယိုနံရံကပ်ထုတ်လုပ်သူကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
မိုးလုံလေလုံငှားရမ်း display ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ပြင်ပငှားရမ်း display ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ပြင်ပတွင် fixed ဦး ဆောင် display ကို
HD အနိမ့်အစေး led panel ကို
မိုးလုံလေလုံပုံသေ ဦး ဆောင် display ကို
ကခုန်ကြမ်းပြင် display ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ပွင့်လင်း led ဗီဒီယိုမြို့ရိုးကို
HD LED တီဗီစီမံကိန်းများ
အားကစား ဦး ဆောင်ဖြေရှင်းချက်
စီးပွားဖြစ် ဦး ဆောင်ဖြေရှင်းချက်
ရှေ့ access ကိုဖြေရှင်းချက်
လက်မှတ် & ဂုဏ်ယူပါတယ်
HYTE LED သည်သင်၏ professional turn-key LED display screen solution provider ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည် LED ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များ၏အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက်သည်မိုးလုံလေလုံမှကွဲပြားသည် & ပြင်ပကြော်ငြာ LED display ကို, စင်မြင့် LED မျက်နှာပြင်, အားကစား LED မျက်နှာပြင်, အားကစားကွင်းပတ်လည်အတိုင်းအတာ LED display ကို, အဖြစ်အပျက် LED display ကို, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED display ကို, ထိုကဲ့သို့သောဘောလုံးအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဖန်တီးမှု LED display ကို, တုံး, ဆလင်ဒါ, စသည်တို့, တီဗီဘူတာရုံ LED display ကို, အစိုးရရဲ့ LED မျက်နှာပြင်, မြေအောက်ရထား LED display ကို, တက္ကစီ LED display ကို, ကြမ်းပြင် LED display ကို, စွမ်းအင်ချွေတာ LED display ကို, နှင့်ပိုပြီး.
တပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှု LED Display ကို
Front-access LED LED များသည်ကန့်သတ်နေရာများ၏ပြsolveနာကိုဖြေရှင်းရန်နံရံများတွင်တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော LED display များဖြစ်သည်. သူတို့ကပါးလွှာတယ်, အလင်း, တတ်နိုင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးကောင်းများရှိသည်,သူတို့ကအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပရှေ့ access ကို ဦး ဆောင်ပြသမှုရှိနိုင်ပါသည်,မိုးလုံလေလုံ P1.875 P1.923 နှင့်ပြင်ပ P8 P10 ကဲ့သို့ ...
စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာခြင်း LED Display ကို
Commercial Advertising LED Display သည်စီးပွားဖြစ် LED video wall (သို့) Advertising LED display လည်းဖြစ်သည်, ထို LED display ကိုစျေးဝယ်စင်တာတွင်ကြော်ငြာခြင်းအတွက်အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်, ကုန်တိုက်, လမ်းဘေး, အဆောက်အ ဦး, မီဒီယာ, အစိုးရ, ဘူတာရုံ, လေဆိပ်, စသည်တို့. သူတို့အားပြသမှုများ၏အဓိက function ကိုဖြစ်ကြသည်: အာရုံစူးစိုက်မှုကိုနှိုးဆွ, သတင်းအချက်အလက်ဖြန်ဖြေ.
ဇာတ်စင်ငှားရမ်း LED display ကိုမြို့ရိုး
Stage LED display ကိုစင်မြင့်နောက်ခံ LED display လို့လည်းခေါ်တယ်, ဆောင်ပုဒ်, မင်္ဂလာဆောင်, ဖျော်ဖြေပွဲ, အကြီးစားဖျော်ဖြေပွဲ, ဂီတခရီးစဉ်, လမ်းပြ, ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲများနှင့်စသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်ငှားရမ်းသော LED display သည်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, တည်ငြိမ်သော, စိတ်ချရသော, ခရီးဆောင်, လှသောအဆင်း, မြင့်သည်…
အားကစားကွင်းပတ်လည်မီတာ LED Display ကို
အားကစားကွင်းပတ်လည်မီတာ LED မျက်နှာပြင်ကိုလည်းအားကစားပတ်လည်အတိုင်းအတာကြော်ငြာ LED မျက်နှာပြင်ဟုခေါ်တွင်သည်. အဓိကအင်္ဂါရပ်ကတော့အားကစားကွင်းမှာသုံးတဲ့ LED display တွေပါ, ထိုကဲ့သို့သောဘောလုံးများအတွက်အဖြစ်အားကစားစင်တာ, ဘတ်စကက်ဘော, ကြက်တောင်, ဘော်လီဘော, ရေကူး, ရပ်ဘီ, ရေခဲပြင်ဟော်ကီ, နောက် ... ပြီးတော့. ပုံမှန်အားဖြင့် Perimeter LED Display ကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးနောက်ကျောဘက်သို့အနည်းငယ်တင်ထားသည်….
မိုဘိုင်းထရပ်ကား Led Display ကို
ထရပ်ကားများနှင့်နောက်တွဲယာဉ်များအတွက်မိုဘိုင်း LED ပြသမှုများကသင်၏ဖြစ်ရပ်များနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုနေ ၀ င်တောက်ပ။ လေပြင်းမုန်တိုင်းဖြစ်စေမီးမောင်းထိုးပြသည်. မြင့်မားသောဆန့်ကျင်ဘက်အချိုးသည် display ကိုဖတ်ရန်လွယ်ကူစေပြီးခိုင်ခံ့သောဆောက်လုပ်ရေးသည်ရာသီဥတုကြောင့်ပျက်စီးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.
LED တီဗီ LED မျက်နှာပြင်
ချွန်ထက်သောရုပ်ပုံလွှာနှင့်အတူ,အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်အပြောင်းအလဲနဲ့ mode နဲ့သက်သေပြနည်းပညာ,ကျွန်ုပ်တို့၏ဒဏ်ငွေ - LED LED မျက်နှာပြင်သည်ခေတ်သစ်တီဗီစတူဒီယို၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်.
ထို့ကြောင့်,Ultra HD မျက်နှာပြင်ပုံရိပ်ရှိသည်,အရောင်အပူချိန်၏ကျယ်ပြန့,တည်ငြိမ်သောအသံလွှင့်စနစ်,မြင့်မားသော Refresh Rate,နှင့်ဒဏ်ငွေ display ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု,သေးငယ်သည့်အစေး LED မျက်နှာပြင်သည်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်….
သေးငယ်သော pixel pitch P1.5 သည် HD Led display ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်
HD Video Advertising Led Display P7.81 ပွင့်လင်းမြင်သာသောမျက်နှာပြင်နံရံ
Hyte-Led အုပ်စုသည်အရည်အသွေးကောင်းသောအိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပမှ ဦး ဆောင်သောဗွီဒီယိုနံရံမျက်နှာပြင်များကိုတတ်နိုင်သည့်စက်ရုံစျေးနှုန်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်.5၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အရည်အသွေးပြည့် ၀ ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားဂရုပြုမှုကင်းမဲ့စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအာမခံပါသည်.
ကြမ်းပြင်ကခုန် ဦး ဆောင် display ကို
ကြော်ငြာခြင်းအတွက် LED ဗီဒီယိုနံရံမျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် ကြော်ငြာခြင်းအတွက် LED ဗီဒီယိုနံရံမျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များ
LED မျက်နှာပြင်ဗွီဒီယိုနံရံများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemsနာများ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED မျက်နှာပြင်ဗွီဒီယိုနံရံများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemsနာများ
DIP led screen နှင့် SMD display screen အကြားခြားနားချက် မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် DIP led screen နှင့် SMD display screen အကြားခြားနားချက်
မူပိုင်ခွင့် 2020 © Hyte Led & sales@hyte-led.com